Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 20: akụkọ nke San Sebastiano | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 20: akụkọ banyere San Sebastiano
(Bɛyɛ afe 256 - Jenụwarị 20, 287)
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nke akụkọ ihe mere eme doro anya banyere Sebastiano belụsọ na ọ bụ onye okwukwe Rome, e sọpụrụ ya na Milan ugbua n'oge Sant'Ambrogio wee lie ya na Via Appia, ikekwe na nso Basilica dị ugbu a nke San Sebastiano. Nsọpụrụ ya na-agbasa ngwa ngwa ma kpọọ ya aha n'ọtụtụ ndị nwụrụ maka okwukwe n'oge 350.
Akụkọ banyere San Sebastiano dị mkpa na nka ma enwere nnukwu akara ngosi. Ndị ọkà mmụta kwetara ugbu a na akụkọ ifo nke nwere nsọpụrụ nwere Sebastian isonyere ndị agha Rome n'ihi na ọ bụ naanị ebe ahụ ka ọ nwere ike inyere ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ahụ n'emeghị ka enyo ya enyo. Emechara chọpụta ya, kpụta ya n'ihu Emperor Diocletian ma nyefee ya n'aka ndị na-agba ụta Mauritania ka ha gbuo ya. Ahụ ya gbara ya ma were ya ka onye nwụrụ anwụ. Ma ndị chọtara lie ya chọtara ya ka ọ dị ndụ. Ọ gbakere mana ọ jụrụ ịgbapụ.
Otu ụbọchị, ọ nọdụrụ ala n’ebe dị nso ebe eze ukwu ga-agafe. Ọ gakwuuru eze ukwu, na-akatọ ya maka obi ọjọọ o mesoro Ndị Kraịst. Na nke ugbu a, ikpe ọnwụ. Ejiri okpiri tie Sebastian ka ọ nwụọ. E liri ya na Via Appia, nke dị nso na catacombs nke bu aha ya.
Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ n'ime ndị nsọ oge gboo nwere mmetụta dị egwu otu a na Nzukọ-nsọ ​​- ịkpọte nraranye zuru oke na otuto dị ukwuu site n'aka ndị ode akwụkwọ kachasị elu nke Churchka - bụ ihe akaebe nke ụdị ndụ dike ha. Dị ka e kwuworo, akụkọ ifo nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu. Ma ha puru igosiputa ihe bu okwukwe na obi ike nke putara ihe na ndu ndi dike ndia.
San Sebastiano bu onye nchebe nke:
Ndị na-eme egwuregwu